अष्ट्रेलियामा डा. हुमबहादुर गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
सिड्नी । कास्कीको सिक्लेका संरक्षण विद डा. हुमबहादुर गुरुङ अष्टेलीयामा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् ।
संरक्षण क्षेत्रमा डा. गुरुङले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलेको भूमीकाबाट अष्टेलियाको ग्रिफित विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय एलम्नस अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित गरिएको हो ।
विश्व विद्यालयमा अध्ययन गरिसकेको विश्वका १ सय ४५ देशका २ लाख जना अन्तर्राष्ट्रिय आलमुनस प्रतिस्पर्धाबाट गुरुङले यो अवार्ड पाएका हुन् । अष्टेलियाको ग्रिफित विश्वविद्यालयमा प्रदान गर्ने अवार्डबाट यस वर्ष कास्कीको मादी गाउँपालिका सिक्लेसका संरक्षण विद डा. गुरुङलाई अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो । यो अवार्ड पहिलो पटक नेपालीले पाएका हुन् ।
डा गुरुङ सहभागीता मुलक अनुसन्धान र समुदायमा आधारित पद्यतीहरु, वातावरण शिक्षा, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, दिगो पर्यटन व्यवस्थापनमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल पंछी संरक्षण संग लगायतका बिभिन्न संघ संस्था हुँदै डा गुरुङ हाल बर्डलाईफ इन्टरनेशनल मलेशियाका क्षेत्रीय परियोजना अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् ।